7 Benefits dzeGore Kana wanga uchigara kunze kwegridi, usina kubatana kubva kune zvivakwa zvemudhorobha, unogona kunge usati wanzwa nezvechinhu chegore. Iine imba yakabatana, unogona kuseta yekuchengetedza makamera kutenderedza imba uye inochengetedza motion-activated...
Nhoroondo ye MotioMotioQlikSoterre
Business AnalyticsBhizinesi NjereCognos AnalyticsQlikUpgrades
Business AnalyticsBhizinesi NjereQlik
Instant replay yakashandura nzira yatinoshandisa nayo varaidzo. Tsoka yake yaive mumiganhu here paaiita kubata ikoko? Ngatipedze nguva uye tibvunze zoom lens! Mira, akati chii? Dzorera uye utambe chiitiko icho zvakare! Wakamhanya zvechokwadi mwenje mutsvuku? Nguva yekupisa ...
Qlik Luminary Hupenyu Chikamu 4 - Juraj Mišina we EMARK Analytics
Chikamu 4 cheQlik Luminary Hupenyu hwasvika! Vhiki rino takave nemukana wekubvunzurudza Juraj Mišina kuti udzidze zvakawanda nezve zvazviri kuita seMukuru BI Nyanzvi kuEMARK, imwe yemakuru makuru eQlik-akasarudzika eCentral Europe, pamwe nekunakidzwa ...
Kugamuchirwa kuchikamu 3 cheQlik Luminary Hupenyu! Vhiki rino takabata Kabir Rab, solution muTahola LTD kuti adzidze zvakawanda pamusoro penzvimbo yake yekuverenga data kuvana, kuda kwake mutambo wekiriketi, uye rairo yake kune avo vanoda kuve ...
Qlik Luminary Hupenyu - Kubvunzana naNitesh Sethi, CEO weCliqVenus
Muchikamu chevhiki rino cheQlik Luminary Life, takafara kutaura naNitesh Sethi, CEO weCliqVenus Consulting neMabasa, uye takadzidza zvakawanda nezvekuti Qlik yakamubatsira sei kupa Fortune 500 ne100 vatengi, ruzivo rwake se3x Qlik Luminary, uye nei ...
Qlik Hupenyu Hunojeka - Joe Warbington weVizlib
pano pa Motio isu tatanga blog nyowani uye vhidhiyo kubvunzana nhevedzano yakanzi Qlik Luminary Hupenyu. Chinangwa cheiyi nhepfenyuro ndeyekusimbisa uye kuratidzira Qlik Mwenje, tsvaga kuti nei vachida Qlik uye nekuvaziva pane imwe nhanho yemunhu. Kune yedu yekutanga ...
Mwedzi wapera, takakurukura nezvakanakira kuzvishandira-BI mune yedu blog. Imwe njodzi yekuzvishandira-BI ndeyekuti data rakavhurika kune dudziro yemumwe nemumwe, uye nekudaro inogona kunge iri pasi pemafungiro uye kusarura. Sezvo nzanga yedu ichiwedzera kuvimba nedata, ...
Yemahara Fomu Dhata Kuongorora vs. Dhata Kutonga uye kuti inoenderana sei neJapan Delicacy
Ndakamira pamberi pechidzitiro, ndakanyatsoongorora sarudzo dzangu kudon. Rwakanga rwuri rwendo rwangu rwekutanga kuenda kuTokyo, uye kukwezva kwema noodles egorosi kwaive kwakanyanya. Ndakaita sarudzo yangu yemasikati, ndikatora risiti rakanyorwa nechiJapanese, ndokufamba ndichipinda mukati mechitoro chema noodles. Ndakatambidza ...
Kudzika Kwakadzika muChirevo cheQlik cheNongedzo: Maitiro Ekutarisa Mukati / Tarisa Kunze Kunowedzera Kuenderera Kubatana.
Qlik Sense yakazivisa kuwedzerwa kwe cheki mukati / tarisa kune yavo chirevo chekutungamira, danho rakakura kumberi mukushandisa Kuenderera Kwekubatanidza kune yako BI maitiro. Padanho rehunyanzvi, Kuenderera Mberi kusangana ndiko kuita kunoongorora kodhi yeprojekiti ...
Kutendeuka kubva kuCQM kuenda kuDQM: Rwendo rweCustomos rweVatengi
Kunyangwe iwe uri kufunga kutamira kune IBM Cognos Analytics paGore, uchida kushandisa madhiraivha eJDBC pachinzvimbo chekuzvarwa dhatabhesi mutengi, kana kungoda kuoneka kukuru mune zvine chekuita nemabatiro ehunhu emibvunzo, kutora Dynamic Query Mode yakanaka ...
Kana sangano rako richigara richichengeta data rakaomarara, iwe unofanirwa kushandisa nzira dzekuchengetedza kuchengetedzeka kwedata rekuchengetedza kwete chete vanhu avo data racho nderevo asiwo nesangano rako kubva kutyora chero mitemo yemubatanidzwa (semuenzaniso HIPPA, GDPR, nezvimwewo). Izvi ...
Business AnalyticsBhizinesi NjereCognos AnalyticsMotioCI
Kunze kwekunge iwe usati wabatwa neboka redu rekushambadzira (uye chaizvo, nei iwe uchida izvozvo?) Saka iwe unzwe nezve ichi "MuCognos Bhokisi" chiziviso. Uye zvakanyanya kukurudzirwa, mibvunzo yakawanda inouya nenzira yedu. Tinoda kushinga kunouya kubva kune vatengi vedu uye ...
Kudzora kweshanduro kwakapa VTCT rusununguko rwekutsvaga data muQlik Sense. Ivo havachafanirwe kunetseka nezvekugadzira nyowani makopi eimwe neimwe iteration yekugadzira.
Kudzora kweshanduro kunoratidzira chaizvo zvakachinja, zvichigonesa RAS kuti ione zviri nyore pakakanganiswa chikanganiso. Kuchengeteka mambure eshanduro kudzora kwakapa RAS chivimbo chekuita ushingi sarudzo.
Tsvaga uye Mass Kuwedzeredza Mafonti mune ZVESE ako eCognos Mishumo, nekukurumidza uye Nyore
Fungidzira sangano rako rafunga kumutsiridza yavo, uye iwe wakapihwa basa rekuvandudza mafonti pane ese makambani-akazara mameseji asiri Arial kana Helvetica ine Arial. Asi iwe ungaenderera sei kuti uzadzise iri basa reherculean? Wepakati mutengi Cognos ...
kushandisa MotioCI "PDF Diff" Kuti Kumhanyisa Iyo Cognos Ndiwedzere Maitiro
Kuwana zvikanganiso mukuburitsa zvinobuda kunogona kunge kuri basa rakaoma uye rakaoma. Zvinonyanya kunetsa kana yako Cognos system iine gungwa remishumo! MotioCI Unogona kufamba wakadzika munzvimbo dzako dzeBudiriro, Kugadzira, uye QA kuti ubate hove dzakazadzwa nezvikanganiso ...
Mune izvi tevera kune yangu yekutanga posvo nezve mafirita. Ndiri kuzotaura muchidimbu nezve mafirita manhamba mukati MotioPI Nyanzvi. Pasina imwezve ado, ngatinyurure muhuwandu hwezvinhu mafirita mukati MotioPI! Nhamba Zvivakwa Mafirita Ndezvipi Nhamba Zvivakwa Mafirita Nhamba ...
Cognos Kuongorora - Tora Nyevero Kana Yako Cognos Performance Yatanga Inokuvadza
Motio ReportCard chishandiso chakanakisa chekuongorora uye kugadzirisa mashandiro eCognos. ReportCard unogona kuyera mishumo munzvimbo yako, tsvaga zvinhu zvinokonzeresa kudzikira mukuita, uye nekupa mhedzisiro yekuti yakawanda sei mashandiro anogona kuvandudzwa ne ...
Wakamborasikirwa kana kushatisa iyo Cognos Sisitimu yeManeja Muenzaniso? Wati wamboshuvira here kuti iwe udzore yakarasika modhi inoenderana neruzivo iyo inochengeterwa muCognos Yako Yekutengesa (semuenzaniso pasuru iyo yakaburitswa kubva kune yakarasika modhi)? Iwe uri muhombe! Iwe ...
Iwe unoziva chibooreso: IBM inozivisa iyo nyowani vhezheni yavo yeBhizinesi Intelligence chishandiso, Cognos. Iwe unotsvaga iyo Cognos Blog-o-sphere uye unopinda ku sneak-preview zvikamu zveruzivo pane iyo nyowani kuburitswa. Icho chinopenya! Mishumo yako ichave yakanyanya kufara mu ...
Ungagadzirisa Sei Gedhi reCognos 11 Mubvunzo uyo watinowanzobvunzwa ndeuyu: Chimwe chezviitiko zvakajairika uko kuve neExpional Gateway setup inova inosungirwa ...
Cognos AnalyticsMisa kugadzirisa CognosMotioPI
Kuvhurwa kwe IBM Cognos Analytics kwakaratidza kuburitswa kwezvinhu zvakawanda zvitsva pamwe nekumisikidza akawanda mainstays eakare maCognos shanduro. Chimwe chezvinhu izvi zvitsva rudzi rwechirevo, chinonzi chirevo "chinowirirana zvizere". Mishumo yekudyidzana yakazara ine ...
Maitiro Ekuyedza Cognos Dhata Sosi Yekubatanidza
DAMBUDZIKO: Mushandisi weCognos (ngatimudane "Carlos") anoedza kumhanyisa mushumo asi anotambira mhosho inoratidza kuti kuyedza kubatanidza kune dhata kunokona. Carlos anokuzivisa iwe, maneja, nezvenyaya iyi uye iwe zvino wave nebasa rekutsvaga iyo ...